သတင်းများ | Ministry Of Information
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ ခရီးသည်တင် မန်းရွှေမြို့တော် မှန်လုံအမြန်ယာဉ် တိမ်းမှောက်
Post date: 05/26/2013 - 21:39
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် နတ်ရေတွင်း တံတားအနီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၂၅ မိုင် ၄ ဖာလုံတွင် မေ ၂၅ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်က မော်လမြိုင်မှတဆင့် ရန်ကုန်မှ ခရီးသည်များ တင်ဆောင် မောင်းနှင်လာသော မန်းရွှေမြို့တော် ခရီးသည်တင်ယာဉ် ၆ဃ/ . . . သည် ရှေ့ဘီးပေါက်၍ တိမ်းမှောက်သွားရာ ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ခရီးသည် ကျား၊ မ ၁၁ဦး သေဆုံးသွားသည်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေး၏ အမှာစကား
Post date: 05/25/2013 - 11:22
ကျွန်တော့အနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပါ သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီကနှင့် ယခုလတ်တလော ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အပြောင်းအလဲများစွာကို ယခုတစ်ခေါက် လာရောက် လာရောက်လည်ပတ်ရာတွင် ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်ဟု ပျော်ရွှင်စွာ မျှော်လင့် စောင့်စားမိပါသည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့်ဇနီးတို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးလည်ပတ်ရန် ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိ
Post date: 05/25/2013 - 10:42
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့်ဇနီး မစ္စစ် အာကီအာဘေး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ချစ်ကြည်ရေးခရီး လည်ပတ်ရန် ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိကြသည်။
သတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြင့် ပြန်ကြားနိုင်စေရန် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့များနှင့် အမေရိကန်ပညာရှင်များ တွေဆုံဆွေးနွေး
Post date: 05/24/2013 - 08:46
ဥပဒေရေးရာ ICT နည်းပညာနှင့် မီဒီယာဆွေးနွေးပွဲကို မေ(၂၂)ရက်နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ အမေရိကန်မှ မီဒီယာဥပဒေနှင့် လူထုဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့သည်။
မီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းအသစ်များ ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခြင်း ပါဝင်သည့် မြန်မာ့ မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံ မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညီလာခံက အခိုင်အမာ ထောက်ခံ
Post date: 05/23/2013 - 08:25
ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာ့မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညီလာခံကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Myanmar Media Development Thematic Working Group (MDTWG) ၊ ယူနက်စကို (UNESCO )၊ အိုင်အမ် အက်စ် (IMS) တို့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် မေ ၂ဝ ရက်နှင့် ၂၁ ရက်တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကန်တော်ကြီး ပဲလေ့စ်ဟိုတယ်၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ မြန်ဆန် အစိုးရသစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်ပြောင်းလဲမှုသည် များစွာအားတက်စရာဖြစ်
ဒုတိယအကြိမ် မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညီလာခံကို မေ ၂၀ ရက်နှင့်၂၁ ရက်တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာနိုင်ငံတကာ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများဈ ပြည်တွင်း မီဒီယာ များမှသတင်းထောက်များ၊ အယ်ဒီတာများက မြန်မာ့မီဒီယာလောက ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ဆွေးနွေး
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ အခြေခံမူဘောင် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့
Post date: 05/23/2013 - 06:19
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ နှစ်နိုင်ငံ အောင်မြင်မှု ရလဒ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညီလာခံ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Post date: 05/21/2013 - 21:15
With nearly 300 participants the 2ndConference on Media Development in Myanmar on 20 – 21 May in Yangon brought together all relevant media stakeholders together inajoint push to further support the media reform process afterayear with significant milestones.
ဒုတိယအကြိမ် မီဒီယာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးညီလာခံဖွင့်ပွဲ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် အမှာစကားပြောကြား
Post date: 05/20/2013 - 18:41
“မီဒီယာ ဗဟုဝါဒသည် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဩဇာ ကင်းလွတ်သည့် မီဒီယာ ပြိုင်ဖက်များ ရှိနေမှသာလျင် ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း”ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ပြောကြားသွား သည်။
SSA (ရွက်ဆစ်) အဖွဲ့မှ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအား ဖမ်းဆီး
Post date: 05/20/2013 - 08:01
SSA (ရွက်ဆစ်) အဖွဲ့မှ အင်အားသုံးဦးခန့် ပါဝင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် လက်နက်ငယ် ကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်လျက် ကျောက်ဂူမြို့နယ် နောင်ဂိုးကျေးရွာသို့ မေ ၁၁ ရက် ညပိုင်းက ဝင်ရောက်လာကာ အပြစ်မဲ့ ရွာသား အမျိုးသား ခုနစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး